Iikhosi ze-16 zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi 2022
Apha ngezantsi kukho iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika zabafundi baseMzantsi Afrika nakwiyiphi na indawo yehlabathi. Ezi zifundo zisimahla ukuba ziphicothwe kwaye ekugqibeleni, abathathi-nxaxheba abaphumeleleyo banokukhetha ukufumana isatifikethi esiqinisekisiweyo nokuba simahla okanye ngentlawulo yokubiza.
Ukufunda nge-Intanethi kuye kwasasazeka ngakumbi kwiziseko zayo, kunye namazwe ase-Afrika ngoku asebenzisa inkqubo leyo ebonisa ukuba indlela yokuhambisa ibilunge kangakanani kwaye iluncedo kangakanani. Ukuziqhelanisa yenye yezona zinto ziphambili nezona zilungileyo ezenziweyo licandelo lezemfundo ukuza kuthi ga ngoku.
Ukudityaniswa kwetekhnoloji yemithombo yeendaba kunye nemfundo yinto evelise le ndlela yokufunda ekwi-Intanethi eyonwatyelwa ngumntu wonke namhlanje.
Ukufunda nge-Intanethi kwenze abantu abaninzi ukuba baphumelele kwizifundo, bathathe imisebenzi yabo bayise kwinqanaba elilandelayo ngokunikezela ngezakhono ezitsha nolwazi ngaloo ndlela bevula iingcango ezininzi zamathuba.
Uyazi, okukhona ubuchule buya kufumana amathuba angakumbi aya kuvulelwa wena. Ukuba usebenza kwisebe elithile kwaye ufumana isakhono esitsha kwi-intanethi kwelinye, kukwenza ube ngesandla kumbutho wakho kwaye unokuba ujonge kunyuselo okanye ukonyuswa komvuzo, nokuba kwenzeka ntoni oko kuthetha ukuba ufumana imali eninzi.
1 Malunga nezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi
1.1 Ngaba iikhosi zoMzantsi Afrika ezikwi-Intanethi ezifanelekileyo?
1.2 Yintoni endinokuyifunda kwi-Intanethi eMzantsi Afrika?
2 Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi
2.1 Ukuqonda uPhando lweeKlinikhi: emva kweStatisti
2.2 Yintoni ingqondo?
2.3 Ukukhutshwa: Kwangaphambili kunye ngoku
2.4 Ithiyori yoTshintsho kuPhuhliso
2.5 Benza ntoni abaYili kunye nabaCwangcisi beeDolophu?
2.6 Iindlela zoPhando: Indlela yoBunjineli
2.7 Intshayelelo kuMzekelo kaStewart wePhysology Acid-Base Chemistry
2.8 Inkqubo yeDynamics yeeSayensi zezeMpilo
2.9 Ubutshantliziyo kunye nobuntatheli beLizwe ngeendaba
2.10 UkuBhala kwabaFundi ngokuKhanya kunye neNjongo
2.11 Isidanga sokuqala sokuFunda nokuBhala kwabaFundi kuLawulo naBafundi beShishini
2.12 Inguqu kwidijithali kunye neQela le-IT
2.13 Ulawulo lweProjekthi esekwe kwiziphumo: Ukubeka iliso kunye noVavanyo
2.14 Ukuba nguMenzi woTshintsho: Intshayelelo kwiNtlalo yeNtsha
2.15 Inkqubo yaseSayensi yeJulia
2.16 Amayeza kunye nobuGcisa: ukukhathalela impilo kwezempilo
2.17 # 1 Ukuqonda uPhando lweKlinikhi: Emva kweNkcukacha-manani
2.18 # 2 Yintoni ingqondo?
2.19 Ukukhutshwa okungu- # 3: Ngaphambili nakwangoku
2.20 # 4 Ithiyori yoTshintsho loPhuhliso
2.21 # 5 Benza ntoni abaYili kunye nabaCwangcisi beeDolophu?
2.22 # 6 Iindlela zoPhando: Indlela yoBunjineli
2.23 # 7 Intshayelelo kuMzekelo kaStewart wePhysology Acid-Base Chemistry
2.24 # 8 Inkqubo yeDynamics yeeSayensi zezeMpilo
2.25 # 9 Ubutshantliziyo kunye nobuntatheli beLizwe ngeMedia
2.26 # 10 UkuBhala kwezifundo ngokuCacisa kunye nentsingiselo
2.27 # 11 Izifundo zokuFunda nokuBhala eziBanga eziNgezelelweyo zokuPhatha kunye nabaFundi beShishini
2.28 # 12 Utshintsho kwidijithali kunye neqela le-IT
2.29 # 13 Ulawulo lweProjekthi esekwe kwiziphumo: Ukubeka iliso kunye noVavanyo
2.30 # 14 Ukuba nguMenzi woTshintsho: Intshayelelo kuBuchule boLuntu
2.31 # 15 Julia Inkqubo yezeNzululwazi
2.32 # 16 Amayeza kunye nobuGcisa: ukukhathalela impilo
2.33 Isiphelo kwiiKhosi eziSimahla ze-Intanethi eMzantsi Afrika
2.33.1 Elinye inqaku lezindululo
2.33.1.1 Izifundo zeKhompyutha ezili-13 zasimahla ezineSatifikethi.
2.33.1.2 Izifundo ezili-15 ezikwi-Intanethi eFransi kunye noQhagamshelwano lwazo lweSicelo.
2.33.1.3 I-17 yeYunivesithi yasePrinceton iiKhosi eziSisehla kwi-Intanethi.
2.33.1.4 I-16 yasimahla yezatifikethi zikaRhulumente ze-Intanethi .
2.33.1.5 Iikhosi zasimahla kwiYunivesithi ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi zaBafundi
Malunga nezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi
Ukufunda nge-Intanethi kwenza ukuba imfundo ifikeleleke ngakumbi, awunyanzelekanga ukuba uye eyunivesithi okanye kwikholeji ukuze ufumane imfundo kwaye uqinisekiswe kwaye uchithe imali eninzi. Yonke inokwenziwa kwi-Intanethi, oko kukuthi ngaphandle kwenxalenye apho uchitha imali eninzi kuyo, njengoko kukho iikhosi zasimahla kwi-Intanethi onokungena kuzo kwaye uqokelele izakhono ozifunayo.
Ngaphandle kokufunda kwi-Intanethi kungabizi kakhulu okanye kusimahla njengoko kunokuba njalo, kuyakhawuleza ukugqitywa kodwa usafunda ngesantya sakho kwiimeko ezininzi.
Ukufunda nge-Intanethi kubhetyebhetye kwaye kukho iikhosi ezahlukeneyo onokukhetha kuzo.
Ezi kunye nezinye zizibonelelo ezisisiseko ezinxulunyaniswa nokufunda kwi-Intanethi, amava onke ayamangalisa ngokulinganayo.
Ngoku, kwimeko yokufunda simahla kwi-Intanethi, ungathandabuzi, kunokwenzeka kakhulu kwaye ngeli nqaku, uya kufunda malunga nezifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika kwaye ungafundi nje ngazo kodwa ukwazi ukuthatha inxaxheba kuzo kuzo ngokunjalo.
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika nazo ziza nesatifikethi esiqhotyoshelweyo onokuthi usifumane nemirhumo encinci xa ugqibezela ikhosi, esi satifikethi sinokuncanyathiselwa kwiCV yakho esele ikho okanye kwiRumume ukubonisa ubungqina bokuba uthathe inxaxheba kwezi zifundo.
Ukufumana ubungqina obuqinisekisiweyo kukonyusa amathuba akho okufumana ingqesho okanye ukunyuselwa kwaye ufumana udumo oluphezulu koogxa bakho, kusapho kunye nakubaqeshi. Ikwabeka phambili kukhuphiswano lwabasebenzi njengoko i-HR's naphina emhlabeni iya kuyibona indlela ozimisele ngayo emsebenzini onzima kwaye ikunike ingqesho phambi kwabanye abaneprofayile efanayo neyakho.
Ezi zifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika, njengazo zonke ezinye izifundo ze-Intanethi, azifuni ngaphezulu koqhagamshelo oluzinzileyo lwe-intanethi, i-PC okanye mhlawumbi i-smartphone kunye neerandi ezimbalwa zokuhlawulela isatifikethi sakho.
Kwakhona, ezi zifundo zasimahla ezikwi-Intanethi nangona zivela eMzantsi Afrika zamkela abathathi-nxaxheba kwihlabathi liphela kwaye ingabemi baseMzantsi Afrika bodwa.
Ngaba iikhosi zoMzantsi Afrika ezikwi-Intanethi ezifanelekileyo?
Ezi khosi zoMzantsi Afrika zasimahla ezikwi-Intanethi ezifanelekileyo, kuba zikunika izakhono kunye nolwazi olutsha okanye uzikhusele esele zikho zikunike ithuba lokulandela amaphupha akho ezifundo ngendlela yoxinzelelo kodwa elula.
Yintoni endinokuyifunda kwi-Intanethi eMzantsi Afrika?
Ungafunda nantoni na kwi-Intanethi eMzantsi Afrika nokuba ukwilizwe okanye ungaphandle kwemida yayo. Isigqibo sento yokufunda kwi-intanethi zixhomekeke kuwe nakwinto ofuna ukuyenza ngalo mzuzu.
Ukuba ngokubanzi awazi ukuba yeyiphi ikhosi oza kuyenza, hlala ubukele eli nqaku njengoko zininzi iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika onokuthi ujoyine ukusuka apha. Ezi zifundo zidweliswe apha ngezantsi kunye neenkcukacha zazo zokunceda ukuqhuba ukhetho lwakho kunye nonxibelelwano lwesicelo.
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezineZatifikethi
Emva kophando oluninzi, ndikwazile ukuza nezifundo zasimahla ze-16 ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika kunye neenkcukacha zabo kunye nendlela abanokukunceda ngayo kwikhondo lakho lomsebenzi kunye nokulandela izifundo. Ngaphandle kokuqhubeka, ndiza kudwelisa ezi khosi.
Ukuqonda uPhando lweeKlinikhi: emva kweStatisti
Ukukhutshwa: Kwangaphambili kunye ngoku
Ithiyori yoTshintsho kuPhuhliso
Benza ntoni abaYili kunye nabaCwangcisi beeDolophu?
Iindlela zoPhando: Indlela yoBunjineli
Intshayelelo kuMzekelo kaStewart wePhysology Acid-Base Chemistry
Inkqubo yeDynamics yeeSayensi zezeMpilo
Ubutshantliziyo kunye nobuntatheli beLizwe ngeendaba
UkuBhala kwabaFundi ngokuKhanya kunye neNjongo
Isidanga sokuqala sokuFunda nokuBhala kwabaFundi kuLawulo naBafundi beShishini
Inguqu kwidijithali kunye neQela le-IT
Ulawulo lweProjekthi esekwe kwiziphumo: Ukubeka iliso kunye noVavanyo
Ukuba nguMenzi woTshintsho: Intshayelelo kwiNtlalo yeNtsha
Inkqubo yaseSayensi yeJulia
Amayeza kunye nobuGcisa: ukukhathalela impilo kwezempilo
#1 Ukuqonda uPhando lweeKlinikhi: emva kweStatisti
Ezi zizifundo eziphambili ezinxulumene nokunakekelwa kwezempilo kwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezibonelelwa nge-Coursera yiYunivesithi yaseKapa eMzantsi Afrika kwaye zifundiswe kwi-Intanethi nguGqirha Juan H Klopper.
Le khosi yenzelwe iingcali zonyango, abafundi bezonyango kunye nabantu abajongana nezifundo zophando ngokubanzi. Ifundisa indlela yokutolika ngokulula iikhonsepthi zeenkcukacha-manani ngaphandle kokubandakanya iifomula zemathematics kunye nokuqonda uhlalutyo lweenkcukacha manani.
Abantu abanoluleko oluwela phantsi kophando kufuneka bathathe le khosi, ngakumbi kwicandelo lezonyango liza kwenza ukuba izakhono zakho zophando zibe kwinqanaba eliphezulu. Ufumana ukuqonda iikhonsepthi zamanani ngcono kwaye ngokukhawuleza. Kwakhona, emva kokugqiba ikhosi unokufumana isatifikethi esingqinisisiweyo ngentlawulo encinci.
Ikhosi iyazenzela ngexesha lakho kunye nexesha elingangeeveki ezi-6 kwaye ithatha malunga neeyure ezingama-28 ukuyigqiba.
#2 Yintoni ingqondo?
Sukuyigqwetha kodwa ayingombuzo lowo kodwa simahla kwi-intanethi evela eMzantsi Afrika. Ikhosi ibonelelwe kwiFutureLearn (eyaziwayo iqonga lokufunda kwi-intanethi) yiYunivesithi yaseKapa eMzantsi Afrika kwaye wafundiswa nguNjingalwazi uMark Solms, usihlalo weNeuropsychology ovela kwiyunivesithi enye.
Ingqondo sisixhobo esikhulu somzimba womntu kunye nento enomdla yokufunda ngayo, ngethamsanqa, le khosi iphonononga ezona zinto zichaphazelekayo zesayensi kunye nefilosofi yokuqonda iingqondo zethu.
Abafundi kweli candelo lesifundo banokuthatha le khosi kunye nabo nabaphi na abantu abanomdla abanomdla wokufunda ngokusebenza kwengqondo yomntu.
Ikhosi igubungela imixholo enomdla enjengokwazi, ukuthobela, iarhente, ukutshintsha ingqondo, ukuqonda ingqondo, injongo kunye nokungazi. Emva kokugqitywa, unokufumana isatifikethi ngentlawulo encinci ye- $ 49.
Ixesha lekhosi ziiveki ze-6 kunye nesifundo seveki seeyure ze-3, kukuhamba ngokwakho ngexesha lakho kunye nokulula.
#3 Ukukhutshwa: Kwangaphambili kunye ngoku
Le yikhosi yasimahla ye-biology ekwi-intanethi enikezelwa yiYunivesithi yaseKapa ngeFutureLearn efundisa ngako konke ukuphela kwezinto okwenzekileyo kwixesha elidlulileyo kunye nendlela oku kucinywa kulibumbe ngayo ihlabathi njengoko kunjalo nanamhlanje.
Ngaba uyazi ukuba ubomi emhlabeni buye badlula kwiziganeko ezintlanu zokupheliswa kwezinto ezininzi kwaye umhlaba ngoku ubandezeleka sisifo esinye? Ngapha koko, ulindele ukuphela kwesithandathu, jonga zonke iimpendulo kwezi kunye nokunye ngokujoyina le khosi yasimahla ye-Intanethi eMzantsi Afrika.
Le khosi ineeveki ezintlanu ubude apho iveki nganye inikezelwe ekufundiseni malunga nokupheliswa kokuphela kwesihlanu kodwa kuya kufuneka ubeke umgudu wokusebenza weeyure ezi-3 ngeveki kwaye ufumana isatifikethi sokugqitywa ekugqibeleni.
#4 Ithiyori yoTshintsho kuPhuhliso
Le yenye yezona zifundo zifumaneka simahla kwi-Intanethi eMzantsi Afrika, ibonelelwa yiDyunivesithi yaseWitwatersrand ngeqonga lokufunda elikwi-edX kwaye ifundisa indlela yokusombulula nokusombulula ngokufanelekileyo iingxaki kusetyenziswa indlela yethiyori yoTshintsho (ToC).
Sukukhathazeka, uya kufunda ukuba yintoni iTheory yoTshintsho kwaye ufunde izixhobo eziyimfuneko kunye nobuchule bokuqonda iithiyori ezikhoyo zotshintsho kwaye ukwazi ukuziphuhlisa. Uya kufunda kwakhona imigaqo-nkqubo enxulumene noko kunye nokunye okuninzi.
Ubuchule kunye nolwazi olufumanayo kule khosi yasimahla kwi-Intanethi zinokufika ziluncedo kumbutho, uya kwaziwa kakhulu ngobuchule bakho bokucinga kunye neendlela zokusombulula iingxaki. Ikhosi ziiveki ezi-7 ubude ngomzamo we-3-4 iiyure ngeveki kwaye uza nesatifikethi ekupheleni kwenkqubo yakho.
#5 Benza ntoni abaYili kunye nabaCwangcisi beeDolophu?
Abantu abangekho kule ntsimi bahlala bezibuza ukuba ngabaphi abakhi bezakhiwo kunye nabacwangcisi basezidolophini abenza ngokuthe ngqo, eli lithuba elihle lokugcwalisa ukwazi kwakho ngezibakala eziqinisekisiweyo kwaye zeziphi iingcali zoyilo lwendawo ezenzayo kwaye ziyayazi imiceli mngeni kunye namathuba abahlangana nawo.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi eMzantsi Afrika inikezelwa yiYunivesithi yaseWitwatersrand ngeqonga lokufunda online le-edX, isatifikethi sokugqitywa siyafumaneka. Kuthatha iiveki ezintathu ukugqiba ikhosi ngomzamo womsebenzi weeyure ezingama-3-2 ngeveki.
#6 Iindlela zoPhando: Indlela yoBunjineli
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi eMzantsi Afrika ijolise kubafundi abaphumeleleyo kwinqanaba lobugqirha nakwisifundo sobugqirha besebenza kwiprojekthi yobunjineli ukunceda ukuqhuba umsebenzi wabo wophando wobunjineli kusetyenziswa iindlela ngeendlela zophando.
Uya kufunda izixhobo ezifunekayo kuphando loyilo, uyilo lwenkqubo yophando, kunye nokuninzi okunokukuxhobisa ngolwazi kunye nesakhono esifunekayo, ucwangcise kwaye uphuhlise eyakho inkqubo yophando.
Ikhosi yokuhamba ngokwakho iza nesatifikethi esiqhotyoshelweyo kwaye ithatha iiveki ezisibhozo ukuyigqiba ngomzamo weeyure ezingama-8-2 ngeveki.
#7 Intshayelelo kuMzekelo kaStewart wePhysology Acid-Base Chemistry
Ngaba ungumongikazi we-ICU, ugqirha okanye ukhathalelo oluqatha? Ke le khosi yeyakho.
Ikhosi yasimahla ekwi-Intanethi yazisa abafundi kwimodeli kaPeter Stewart yekhemikhali ye-acid-base chemistry eyinxalenye ebalulekileyo yemfundo yeengcali zonyango kwaye iyasebenza kulawulo lwezigulana kuseto lokhathalelo olunzima.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi eMzantsi Afrika yikhosi enxulumene nezonyango enikezelwa yiYunivesithi yaseWitwatersrand ngokusebenzisa i-edX yokufunda iqonga le-Intanethi ekufundiseni iikhonsepthi ezibalulekileyo kwisisombululo nakwi-acid-base chemistry.
Ikhosi iyazenzela ngexesha lakho kwaye igqityiwe kwiiveki ezi-5 ngomzamo we-3-4 iiyure ngeveki, kukwakho nesatifikethi esiqhotyoshelweyo oya kusifumana nemali encinci emva kokugqiba ikhosi.
#8 Inkqubo yeDynamics yeeSayensi zezeMpilo
Izinto ezifunekayo kule khosi ikwi-Intanethi zezi zoqeqesho kwezamayeza okanye kuqeqesho olunxulumene noko kufundiswa malunga nemigaqo esisiseko yenkqubo yeenkqubo kunye nendlela yokusebenzisa izixhobo zokuphonononga nokusombulula iingxaki ezichaphazelekayo kwicandelo lezempilo.
Uya kufunda kwaye ufumane izakhono ezizodwa ezifunekayo kwicandelo lezonyango kubandakanya ukubanakho kokusebenzisa indlela yenkqubo ye-dynamics kuluhlu olubanzi lweengxaki zonyango kunye nendlela yokusebenzisa isoftware yenkqubo ye-dynamics ukuphuhlisa ngokukhawuleza iimodeli kunye nokuqhuba kweengxaki.
Le khosi yasimahla ekwi-intanethi eMzantsi Afrika ineeveki ezinde, uzenzela ixesha lakho ngokuzama iiyure ezi-2-4 ngeveki kwaye uncanyathiselwe kwisatifikethi esiqinisekisiweyo se- $ 139.
#9 Ubutshantliziyo kunye nobuntatheli beLizwe ngeendaba
Imithombo yeendaba sisixhobo esinamandla kakhulu esibonakalise ukubaluleka kwayo kunye nezibonelelo eziphambili kumaxesha akutshanje.
Ukuba ulitshantliziyo elibandakanyekayo ekukhuthazeni okanye ekukhuthazeni izizathu zentlalo, ukuthatha inxaxheba kule khosi kuya kukufundisa indlela yokusebenzisa iindlela zokuziphatha ezikhuselekileyo nezikhuselekileyo, ukwazi ukuchonga isicwangciso esiliqili esifanelekileyo kunye neqonga lokufikelela kubaphulaphuli ekujoliswe kubo.
Le khosi ikwi-Intanethi kwaye isimahla kwaye iza nesatifikethi sokugqitywa. Kuthatha ixesha elimalunga neeveki ezine ukugqiba ngomzamo weeyure ezingama-2-3 ngeveki.
#10 UkuBhala kwabaFundi ngokuKhanya kunye neNjongo
Le khosi ibalulekile kubaphandi, abantu kwindawo yokubhala kunye nawo wonke umntu ngokubanzi njengoko isakha ukubhala kwakho kunye nezakhono zokucinga ezibalulekileyo eziza kunceda iprojekthi yophando lwakho kwaye iphucule ukubhala kwakho ngokwakho.
Le yenye yeekhosi ezaziwa simahla kwi-Intanethi eMzantsi Afrika kwaye ibonelelwa yiDyunivesithi yaseWitwatersrand ngeqonga lokufunda elikwi-edX kwaye ithatha iiveki ezi-2 ukuyigqiba ngemizamo yeeyure ezingama-2-3 ngeveki, iza nesatifikethi ukugqitywa kokuncamathisela kwiCV yakho okanye kwiRome.
#11 Isidanga sokuqala sokuFunda nokuBhala kwabaFundi kuLawulo naBafundi beShishini
Phambi kokuba uthathe le khosi kuyacetyiswa ukuba usigqibe isidanga sokuqala njengoko le khosi ikwi-Intanethi yeyabafundi abaphumeleleyo kwaye inokukunceda ukuba ubandakanyeke kwimithombo yokufunda ukukhaba ukuqala uphando lwakho lwezifundo.
Uyakwazi ukuchonga izibonelelo zemfundo kunye nezobuqu ezixhasa uphando lwasemva kwesidanga, funda ukugxeka inqaku lezemfundo ngobuchule kunye nezinye izibonelelo. Le khosi yasimahla ekwi-intanethi evela kwiziko laseMzantsi Afrika lezemfundo iza nesatifikethi esihlawulelweyo onokuthi usincamathisele kwiCV yakho okanye uphinde uqalise ukubonisa ubungqina bokugqitywa kwezifundo.
#12 Inguqu kwidijithali kunye neQela le-IT
Ihlabathi kungoku nje lingene kulwakhiwo lwedijithali kwaye kungenxa yefuthe elilungileyo eliyenzileyo kwimibutho eyahlukeneyo nakumacandelo.
Intsimi yedijithali yinkqubo yangoku neyenzeka ngokukhawuleza, akukho namnye owaziyo ukuba kuzakwenzeka ntoni kwixesha elizayo, kodwa, ngokusebenzisa iimodeli ezizodwa, inkqubo inokuqondwa, iqikelelwe kwaye ibandakanyeke nayo.
Ngale khosi idumileyo yasimahla ekwi-intanethi eMzantsi Afrika, ungazibandakanya kwiklasi ekwi-intanethi kwaye ufunde ngeemodeli kunye neendlela ezisetyenzisiweyo kuqikelelo lwenguqu yedijithali kwaye uya kufunda nangefuthe lenguqu yedijithali kwindima ye-IT kunye ne-CIO amaqela.
Isakhono solu hlobo sinokumisela ikhondo lomsebenzi wakho ngakumbi kwi-IT nakwinkalo yetekhnoloji yedijithali. Njengokuba kunjalo, phantse, ukuba ayinguye wonke umbutho, amashishini kunye namashishini asebenzayo namhlanje asebenzisa izibonelelo ze-IT ngenye indlela okanye enye. Oku kwenza ukuba abasebenzi be-IT bakwazi ukufumana umsebenzi ohlawula kakuhle naphi na.
Olu hlobo lwezifundo ezikwi-Intanethi kulindeleke ukuba lube negalelo ekwenzeni ukuba ube ngumsebenzi ofunwayo nobalulekileyo kuwo nawuphi na umbutho.
Ikhosi iyazenzela ngexesha lakho kwaye ithatha iiveki ezi-5 ukuyigqiba ngomzamo weeyure ezingama-2-3 ngeveki, iza nesatifikethi sokugqitywa onokuthi usifumane ngentlawulo encinci.
#13 Ulawulo lweProjekthi esekwe kwiziphumo: Ukubeka iliso kunye noVavanyo
Ukuthathwa kwezigqibo kuwo wonke umbutho kuhlala kumisela impumelelo okanye ukusilela kwaye into eyenza ukuba umntu abe ngumphathi olungileyo kukukwazi ukwenza izigqibo ezifanelekileyo ixesha elininzi kwaye obu bubuchule obufunwa yimibutho ephezulu.
Le khosi yoMzantsi Afrika yasimahla ekwi-intanethi iya kukubonisa izixhobo ezifanelekileyo ezisetyenziselwa ukuyila izigqibo ezifanelekileyo, usebenzisa iindlela ezisekwe kwiziphumo ukuyila, ukumilisela kunye nokulawula uluhlu lweenkqubo ezikhulayo kumbutho.
Uya kufunda ukuba ungazisebenzisa njani izikhombisi zentsebenzo ukulinganisa inkqubela phambili, uqhelane nethiyori yesiphumo kunye nokunye okuninzi ukulungiselela izakhono zakho zokwenza izigqibo. Le khosi ye-Intanethi ineeveki ezisi-8 ubude ngomzamo weeyure eziyi-3-4 ngeveki kwaye iza nesatifikethi sokugqitywa onokufumana umrhumo omncinci.
#14 Ukuba nguMenzi woTshintsho: Intshayelelo kwiNtlalo yeNtsha
Le yenye yeekhosi eziphezulu zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ezifundiswa yiYunivesithi yaseKapa ngeCursera.
Ukugqitywa kwezifundo kuthatha malunga neeveki ezi-6 kunye nomzamo weeyure ezingama-3-5 ngeveki kwaye ijongana nokudala iimpembelelo ezintle kuluntu olusondeleyo apho iziphumo zempembelelo entle zinokufikelela nakwilizwe liphela.
Okokuqala uza kuvavanya iingxaki ezichaphazela ukuvela kwezinto ezintsha kwezentlalo kunye nendlela yokujongana nezi ngxaki, ngaloo ndlela ukwenze ukuba ube ngumntu ocinga nzulu ngaxeshanye kwaye uluncedo kuwo nawuphi na umbutho.
Emva kokugqiba uyakufumana isatifikethi, oya kuthi uhlawule umrhumo omncinci ukusifumana, ukubonisa njengobungqina bolwazi lwakho kunye nesakhono sakho, ungasincamathisela isatifikethi kwiCV yakho okanye kwiRome.
#15 Inkqubo yaseSayensi yeJulia
I-Julia kwinqanaba eliphezulu, ukusebenza okuphezulu kolwimi lwenkqubo ephuhliswe ngokukodwa kwikhompyuter yesayensi, iluncedo kuphela kuqeqesho olunxulumene nesayensi olufana nefiziksi, ikhemistri, ubunjineli, isayensi yedatha, njl.
I-Asides iluncedo kakhulu kwiinjongo zesayensi, ulwimi lwenkqubo, uJulia, luyasebenza nakwiinjongo ngokubanzi.
Le khosi yasimahla ekwi-Intanethi iya kukufundisa malunga nolwimi lwenkqubo kunye nendlela yokuyisebenzisa ngokufanelekileyo, nangenjongo yobuqu.
Ikhosi ziiveki ezi-4 ubude ngomzamo weeyure ezingama-4-5 ngeveki, ukuzenzela ixesha lakho kwaye uza nesatifikethi esihlawulelweyo.
#16 Amayeza kunye nobuGcisa: ukukhathalela impilo kwezempilo
Eli sebe lokufunda yinto evelayo, isaziwa ngokuba “luluntu lwezonyango” kwaye yindawo ekudibana kuyo ubugcisa, ubuntu kunye nokhathalelo lwempilo.
Ngokuthatha inxaxheba kule khosi yasimahla ekwi-intanethi eMzantsi Afrika, uya kuba nethuba lokuphonononga le ndawo intsha kwaye ufunde ngemiceli mngeni kunye neengxaki ezizisombululayo kwicandelo lokhathalelo lwempilo.
Le khosi ibonelelwa yiDyunivesithi yaseKapa kwiqonga lokufunda le-futureLearn kwi-Intanethi kwaye kuthatha iiveki ezi-6 ukugqiba ngokufunda-iiyure ze-3 ngeveki, kwaye emva kokugqiba ikhosi, uya kuba nethuba lokukhetha ukufumana umvuzo isatifikethi.
Isiphelo kwiiKhosi eziSimahla ze-Intanethi eMzantsi Afrika
Ezi zifundo zasimahla ezikwi-intanethi eMzantsi Afrika ezinezatifikethi eziza kunceda ukuseka ikhondo lakho lomsebenzi kwaye zikondle ngolwazi olutsha, olusebenzayo. Njengoko benditshilo ngaphambili, ezi zifundo zisimahla ukuba ziphicothwe, oko kukuthi, ungathatha inxaxheba kwezi zifundo zonke simahla kodwa ukufumana isatifikethi ukugqitywa ngempumelelo, unokucelwa ukuba uhlawule umrhumo wokuhlawulwa kwesatifikethi.
Nokuba kukuqala ikhondo elitsha lomsebenzi, ukuxubha izakhono ezindala okanye ukukhetha ezintsha, ezi zifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrika ngokuqinisekileyo ziya kuba luncedo ekukuncedeni ufezekise nantoni na oyifunayo.
Qaphela ukuba ukuzimisela kwakho kunye nokusebenza nzima kuko okuya kukwenza uphumelele ngelixa ufunda. Zama ukunqanda ukuphazamiseka kwaye ukhethe indawo yokufunda efanelekileyo ngokwaneleyo. Inkqubo ye- amaqonga okufunda online eziya kufundiswa kwezi zifundo ziphakathi kwamaqonga awaziwayo kwaye kulungile ukuba iiyunivesithi ezibonelela ngezifundo ezikwi-intanethi zisebenzisana nabo ukuze bakunike amava okufunda akumgangatho we-Intanethi.
Kwakhona, njengomnini wesatifikethi kuyo nayiphi na le khosi, uya kwamkelwa ngesakhono sakho nangayiphi na i-HR kuwo nawuphi na umbutho. Ukuba sele unesidanga, oku kuyakwenza i-CV yakho okanye iqhubeke kwakhona ibonakale inomtsalane. Esi sisibonelelo esikhulu kuwe kunye nethuba ekungafanelekanga ukuba uliyeke, ufumane izakhono namhlanje.
Elinye inqaku lezindululo
Iikhosi ze-15 ezikwi-Intanethi eFransi ngeziQhagamshelo zazo zokuSebenzisa
Iziqinisekiso zasimahla ezikwi-Intanethi zikaRhulumente ezi-16
Iikhosi zasimahla kwiYunivesithi ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi zaBafundi
Iikhosi ze-Intanethi funda kwi-intanethi
Izifundo zasimahla ezikwi-Intanethi eMzantsi Afrikaiikhosi zasimahla kwi-Intanethi ze-unisa
Post Previous:Iikhosi ezingama-27 zasimahla kwi-Intanethi zoKhuseleko ezineZatifikethi
Okulandelayo Post:Ezona zikolo ziBalaseleyo kwezonyango ePennsylvania
okello francis louis uthi:
Disemba 16, 2021 kwi-7: 51 pm
Disemba 16, 2021 kwi-7: 48 pm
Elton Ngorima uthi:
Oktobha 28, 2021 kwi-8: 09 am
Kufuneka ufunde uHlolo kunye noVavanyo, iziFundo zoPhuhliso okanye uMsebenzi weNtlalo
Disemba 16, 2021 kwi-7: 49 pm
Ukubeka iliso kunye nokuvavanya
Pingback: Iikhosi eziphezulu ezi-7 eziMfutshane eziFunwayo eMzantsi Afrika 2021